Daawo:- Donald Trump oo Ceeb iyo Jees jees kala kulmay War been ah uu ka sheegay dalka Sweden - Hablaha Media Network
Daawo:- Donald Trump oo Ceeb iyo Jees jees kala kulmay War been ah uu ka sheegay dalka Sweden
HMN:- Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa laga dalbaday in uu sharaxaad ka bixiyo sababta uu u sheegay in fal ammaan darro uu ka dhacay dalka Sweden Jimcihii, kaas oon xaqiiqo ahaan waxba uga jirin.
Maadaama uusan wax dhib ah ka dhicin Sweden Jimcihii waxay maamulka Maraykanka ka dalbadeen in uu sharaxaad ka bixiyo arrintan uu ka hadlay Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump.
Trump ayaana Twitterkiisa ku soo qoray in uu soo xiganayay warbixin uu Telefeshin ka daawaday,
Wuxuu sheegay in uu ka daawaday warbixin uu sii daayay Fox News, laakiin ma uusan sheegin goortii ay ahayd.
Dadka qaarkood ayaa u fasirtay hadalka uu sheegay Donald Trump a in uu ula jeeday barnaamij jimcihii ka baxay Telefishinka Fox News,kaas oo diiradda lagu saarayay qaxootiga iyo dambiyada ka dhaca Sweden.
Ra’iisalwasaarihii hore ee dalka Sweden Carl Bildt ayaa ka mid ahaa dadkii ku jeesjeesay Trump hadalkiisa, isaga oo ku tilmaamay in uu “wax cabay”, waxaa sidoo kale baraha bulshada wax uga sheegay Trump dad badan oo reer Swden ah.